FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA TSARA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika tsara
Junior ny brindle Great Dane amin'ny 8 volana
labrador retriever australian omby omby mifangaro
Ny Great Dane dia alika goavambe sy matanjaka. Kianja amin'ny vatana, fa ny vavy kosa mety ho lava kokoa noho ny lava. Ny loha lava dia mahitsizoro endrika. Lalina ny vavam-baravarana, ary misy fijanonana mihonona. Ny orona dia mainty, manga / mainty amin'ny Danes manga na mainty hita amin'ny harlequins. Ny maso maizimaizina sy lalina dia matevina. Ny sofina salantsalany dia napetraka avo ary na voajanahary na avela voajanahary. Raha avela amin'ny toetrany voajanahary dia aforitra mihetsiketsika izy ireo, mihantona eo akaikin'ny takolaka. Rehefa voakapa izy ireo dia mijoro mahitsy ary lehibe mifanaraka amin'ny ambin'ny loha. Fanamarihana: tsy manara-dalàna ny fikolokoloana sofina any amin'ny ankamaroan'ny faritra any Eropa. Ny tendany arched tsara dia napetraka avo sy mafy ary hozatra. Ny tongotra eo anoloana dia mahitsy tsara. Ny tongotra dia boribory miaraka amin'ny rantsan-tongotra mainty. Atao ambony ny rambony, matevina kokoa eo am-potony ary mihidy hatrany amin'ny teboka iray. Esorina ny lalàma indraindray. Fohy sy matevina ny palitao. Ny loko dia avy amin'ny brindle, fawn, black, blue, mantle harlequin ary indraindray miroraka. Na dia tsy loko ekena aza ny sôkôla dia mitranga ao amin'ny fototarazo miverimberina. Merle dia vokatry ny fiompiana harlequin, saingy tsy loko ekena izy io.
Ny Great Dane dia manana toetra tsara, antsoina matetika hoe 'goavambe malefaka.' Manintona sy be fitiavana, milalao sy manam-paharetana amin'ny ankizy izy io. Tia ny olona rehetra izy io ary mila mifanila amin'ny olona. Ny Great Dane dia tsy mivonto be ary manjary mahery setra rehefa mitaky izany ny toe-javatra. Azo itokisana, azo itokisana ary azo ianteherana. Be herim-po sy tsy mivadika, mpiambina tsara io. Ny Great Dane dia tsy mijanona kely mandritra ny fotoana maharitra sy tsy miova ary ny fiofanana dia tokony hanomboka hatrany amin'ny alika kely. Ity alika goavambe ity dia tokony hampianarina tsy Hanketo na miankina amin'ny olona. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miara-miaina amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika. Ianao sy ny hafa rehetra olona TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo. Ny alika mahalala ny toerana misy azy eo ambanin'ny olombelona amin'ny filaharany dia ho tsara amin'ny ankizy. Raha tsy mpitondra entana hentitra ianao, matoky tena ary tsy miova izay mahalala ny fomba fanitsiana ny alika rehefa mampiseho famantarana herisetra izy, dia mety ho mahery setra ny alika. Tsy hanana an'ity olana ity ny tompona izay mahay mitantana tsara ny alikany.
Haavony: Lehilahy 30 - 34 santimetatra (76 - 86 cm) Vehivavy 28 - 32 santimetatra (71 - 81 cm)
Milanja: Lehilahy 120 - 200 pounds (54 - 90 kg) Vavy 100 - 130 pounds (45 - 59 kg)
Ny alika manana habe lehibe kokoa aza dia sarobidy kokoa.
Mora voan'ny dysplasia hip, bloat , aretim-po sy ratra amin'ny rambony. Mora amin'ny fivontosan'ny sela . Ny jogging dia tsy asaina raha tsy alika herintaona farafahakeliny ny alika, fa ilaina ny mandeha. Tsy karazany maharitra.
The Great Dane dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Tsy mihetsika izy io ao an-trano ary tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny.
Mila fanatanjahan-tena be ny Great Dane. Mila raisina isan'andro mandeha lavitra .
Ny antonony dia latsaky ny 10 taona, na izany aza misy ny sasany afaka miaina 12-13 taona.
Retriever volamena 1 volana
Litters lehibe dia lehibe matetika, 10 ka hatramin'ny 15 alika kely. Fako iray no nitatitra fa manana alika kely 19!
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Afangaroy sy borosy amin'ny borosy mafy sy shampoo maina rehefa ilaina izany. Ny fandroana an'io goavambe io dia raharaha lehibe, ka mandoa vola mba hisorohana ny filàna amin'ny fikolokoloana isan'andro. Ny fantsika dia tsy maintsy tehirizina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
The Great Dane dia karazany efa antitra, fantatra amin'ny anarana hoe 'Apollo an'ny alika rehetra.' Ny alika mitovy amin'ny Great Dane dia nipoitra tamin'ny vola grika nanomboka tamin'ny 36 am.f.i. Misy ihany koa ny sarin'ireto alika ireto amin'ireo tsangambato ejiptiana nanomboka tamin'ny taona 3000 talohan'i Kristy. Ny asa soratry ny alika taloha indrindra toa ny Great Danes dia tao amin'ny literatiora sinoa nanomboka tamin'ny 1121 al.f.i. Tamin'ny 407 am.f.i., Gaul Alemanina ary ampahany amin'ny Italia sy Espana dia notafihan'ny vahoaka Asiatika (ny Alans) izay nitondra alika mahery toy ny mastiff. Gaga izy ireo noho ny fahaizany nampidina orsa sy lambo dia. Noheverina ho ireo alika ireo Wolfhounds afangaro amin'ny Mastiff anglisy taloha . Miaraka amin'ny fiompiana voafantina dia nampiana Greyhound hamorona ny Great Dane. Ankoatra ny fampiasan'izy ireo ho mpihaza dia alika mpiambina ihany koa izy ireo. Ilay Great Dane dia nekena tamin'ny taona 1887. Ny talenta sasany an'ny Great Dane dia ny fanarahan-dia, ny mpiambina ary ny fanaovana sarety.
eo ho eo ny lanjan'ny bulldog frantsay
Minard the Great Dane amin'ny faha-4 taonany
Gracie ilay harlequin mainty sy fotsy Great Dane amin'ny alàlan'ny alika kely amin'ny 8 herinandro
Great Dane milanja 90 kilao eo ho eo. Mampiseho ny halehibeny.
'Ity i Herschel rehefa nentinay nody tany aminy izy efa 4 volana ary nilanja 51 pounds. Androany dia amboaram-pitiavana milanja 118 kilao izy. '
Ramba sy Runa nuo Grazuciu (LKD), alika kely Dane lehibe 3 volana avy any Litoania, fananan'i H. Kuncevic
Spike the Great Dane amin'ny 1 1/2 taona
Jereo ny ohatra bebe kokoa momba ny Great Dane
Sarin'i Dane mahafinaritra 1
Great Dane sary 2
Great Dane sary 3
Sarin'i Dane tsara 4
Great Dane sary 5
Sarin'i Dane tsara 6
Sarin'i Dane mahafinaritra 7
Alika Dane tsara: sary an-tsokosoko voaangona
afangaro amin'ny lab alika omby amerikana
ny fomba hilaza raha toa akc taratasy dia tena
labradoodle ny tarehiny toy ny laboratoara
alemanina mpiandry akita afangaro alika kely
mpanao ady totohondry miharo Boston terrier
sarin'ny mpiandry ondry alemanina